Taliyaha Ciidamada Kenya oo booqasho qarsoodi ah ku yimid Jubbada Hoose. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Taliyaha Ciidamada Kenya oo booqasho qarsoodi ah ku yimid Jubbada Hoose.
On Dec 25, 2019 363 0
Taliyaha ciidamada Kenya ninka lagu magacaabo Samson Mwatathi ayaa booqasho qarsoodi ah ugu tagay ciidamadiisa ku sugan gobolka Jubbada Hoose ee dalka Soomaaliya.
Ujeedada booqashada ayaa ahayd inuu niyadda u niso ciidamadiisa oo wajahaya culeysyo amni, ciriiri iyo dagaallo joogto ah oo uga yimaada milatariga Xarakada Al-Shabaab.
Sidaa si lamid ah waxay booqashadani xambaarsanayd farriin hambalyo ah oo ku aadan ciida Kirismiska, isagoo waliba taliyihu huwanaa magaca Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Muatathi wuxuu qiray in ciidamada dalkiisa ay khasaarooyin culus ka soo gaareen labo ka mid ah weeraradii ugu dhiig daadashada badnaa ee ay la kulmaan tan iyo markii ay duulaanka ku soo qaadeen Soomaaliya, kuwaas oo kala ah weeraradii “kulbiyow” iyo “Ceelcadde”.
Weeraradan oo lagu dilay boqollaal kamid ah ciidamada Kenya ayaa waxaa xusid madan in Warbaahinta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka heshay dukumiintiyo, taasoo ceeb weyn ku keentay dowladda Kenya, oo inta badan qarsata khasaaraheeda.
Taliyaha booqasahda qarsoodiga ah ku yimid Jubbada Hoose ayaa waxaa la socday taliyaha ciidanka Badda ee isla dalkiisa, kaasoo milatarigooda ku sugan Jubbada Hoose u ballan qaaday iney ka caawin doonaan saadka dhanka badda, maadaama maraakiibtoodu ay ku sugan yihiin xeebaha Soomaaliya.
Dhankeeda, dawladda ay taageeraan reer galbeedka ee Federaalka Soomaaliya kama aysan hadlin booqashada qarsoon ee hogaamiyahan ciidanka Kenya.
Booqasho kale oo taa barbar socotay ayaa waxay ahayd mid iyana uu Soomaaliya ku yimid xilligan Salaami Turker, oo ah madaxa Qaybta Bilayska Gaarka ah ee Turkiga, si uu ula kulmo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federalka.
Booqashada ayaa waxaa shaaca ka qaaday safaaradda Turkiga ee Soomaaliya shalay, oo Isniin ahayd, taas oo lagu sheegay warbixin laguna caddeeyay in taliyaha howlgalada gaarka ah ee booliska Turkiga uu ku sugan yahay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, si kor loogu qaado iskaashiga labada dal.
Waa in la ogaadaa in Turkiga uu adeegyo islamarkaana uu tababar siinayo ciidamada Booliska ee labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, oo ka mid ah waddamada Bariga Afrika, iyada oo ujeeddada laga leeyahay lagu tilmaamay inay tahay xoojinta amniga gobolka.
Tababbarka booliska Turkiga waxaa ka mid ah bixinta saldhigyo sirdoon, la-socoshada dhallaanka iyo mobilada, la-dagaallanka waxa loogu yeero “argagixisannimada”, dambiyada abaabulan, qaababka toogashada iyo xeeladaha, ilaalinta VIPs, xeeladaha booliiska ee difaaca, sirdoonka la-dagaallanka “argagixisada caalamiga ah”, wadahadallada dhibaatooyinka iyo la haystayaasha, Iyo in laga ilaaliyo dhismayaasha muhiimka ah waxa loogu yeeray “argaggixisannimada”, iyo weerarada Elektiroonigga ah.
Indha indheeyayaasha ayaa rumeysan in booqashadan, dhamaadka sanadka hadda ah ay lagama maarmaan u tahay in dib loo soo nooleeyo oo la xasiliyo ciidamadii ka hawl galayay magaalada Muqdisho ee la dagaalamayay XSHM, kadib hal sano oo khasaaro ah iyo dib u dhac badan uu soo wajahay, halka weerarada Mujaahidiintuna sidoodii u socdaan, dowladda iyo shisheeyuhuna ay kusii laba lixaadsaseen ciriiriga iyo cabsida.